फागुन १८, काठमाडौं । ज्योति लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले फागुन २१ गते (शुक्रवार) देखि आईपीओ विक्री खुला गर्ने भएको छ ।
७४ हजार ७०३ ओटा बीमालेख कायम रहेको कम्पनीले दोस्रो त्रैमाससम्म रू. ४ करोड ६३ लाख ७३ हजार कुल बीमाशुल्क आर्जन गरेको छ भने रू. ३ करोड १ लाख ४७ हजार दाबी भुक्तानी गरेको छ ।